November 2019 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Nov 30, 2019 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriga waxay ku beegan tahay 04-04-1441 oo…
Sawirro: Boqollaal Kale oo Qoysas Ah oo Xoolo Sako Ah Loogu Qeybiyay Jubooyinka.
cusmaan	 Nov 30, 2019 0
Boqolaal xoolaha Sakada ah oo isugu jira Geel, Ari iyo Lo’ ayaa loo qaybiyay qaar kamid ah bulshada ku dhaqan Wilaada jubooyinka. Maamulkada degmooyinka Salagle, Saakoow, Jamaame iyo Jilib, ayaa Khamiistii qoysas badan oo dan yar ah siiyay…
Dagaal Askar lagu dilay oo ka dhacay deegaan hoostaga Baardheere.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa ku waramaya inuu dhacay dagaal xoogan oo dhexmaray ciidamo katirsan milliteriga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo askar katirsan ciidamada dowladda federaalka ee jooga qeybo kamid ah gobolkaas.…
Ciidamo Itoobiyaan ah oo la geeyey Dhuusamareeb.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxaa gaaray cutubyo katirsan ciidamada Xabashida Itoobiya, kuwaas oo saldhigtay qeybo kamid ah magaalada. Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamadan…
Weerar Keligii duulnimo ah oo ka dhacay Ingiriiska.
Wararka ka imaanaya wadanka Ingiriiska ayaa ku waramaya in weerar keligii duulnimo ah uu k dhacay magaalada London ee caasimadda wadankaas, kaas oo uu fuliyay qof muslim ah. Weerarka waxaa lagu dilay ugu yaraan 2 ruux, halka sidoo kale…
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Saaka waa Sabti, Taariikhda hijriga waxay ku beegan…
Axmad	 Nov 30, 2019 3
Deegaannada iyo degmooyinka Wilaayada islaamiga ee Jubbooyinka ayaa laga billaabay qeybinta Zakada xoolaha Nool, kuwaas oo loo qeybiyay dadka muteystay ee uu Alle Qur'aanka ku sheegay. Goobaha laga qeybiyay waxaa kamid ah degmooyinka…
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 02-04-1441
Axmad	 Nov 29, 2019 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. maanta waa Jimco Taariikhda hijriga waxay ku beegan…